Nyamavhuvhu 07, 2020
Dzimwe nhengo dzeparamende dziri kurumbidzwa mushure mekubuda pachena kuti dzakabatwa nechirwere cheCovid-19.
Nyanzvi munyaya dzehutano dzinoti zvakanaka chose kuti vakuru vakuru muhurumende pamwe nenhengo dzeparamende vabude pachena kana vachinge vabatwa neCovid-19, dzichiti izvi zvinobatsira pakudzivirira kupararira kwedenda iri pamwe nekuti veruzhinji vasununguke kutaura pamusoro paro.
Vaimbove gurukota rezvekurima, VaPerence Shiri, vakashaya neCovid-19, mutevedzeri wegurukota revechidiki nemitambo, VaTinomuda Machakaire vakabatwawo neCovid-19 vakabuda pachena.
Pane nhengo dzeparamende dzakabatwa neCovid 19 dzikabuda pachena dzinosanganisira mumiriri weHarare South muNational Assembly, VaTongai Mnangagwa pamwe nasachigaro wekomiti yeNational Assembly inoona nezvehutano, Dr Ruth Labode, veMDC Alliance.
Vamwe vakaita segurukota rezvekudzivirirwa kwemukati munyika, VaKazembe Kazembe uye gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, Amai Monica Mutsvangwa, vanoti vari kugara kumba mushure mekuita misangano naVaShiri asi vachiti vari kunzwa zviri nani.
Bato reZanu-PF rakati nhengo dzaro dzinoshandira pamuzinda webato iri muHarare makumi maviri nenhanhatu dzakabatwawo nechirwere ichi.
Vaive gurukota rezvehutano muhurumende yemubatanidzwa, Dr Henry Madzorera, vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa nevakuru vakuru ava pamwe nenhengo dzeparamende zvekubuda pachena zvakanaka chose mukurwisana neCovid-19.
Mumiriri weBinga North muNational Assembly, VaPrince Dubeko Sibanda veMDC Alliance, vati vanobvumirana naDr. Madzorera vachiti pakutanga hurumende yaingoburitsa huwandu hwevanhu vafa kana kubatwa nechirwere ichi pasina mazita.
Vati kubuda pachena kunobatsira kuti munhu wese awone kuti zvechokwadi chirwere ichi chiriko.
VaSibanda vati hurumende yakakanganisa chose payakapinza masoja mumigwagwa mushure mekutanga kwechirwere ichi vachiti ingadai yakatuma vashandi vezvehutano kuti vadzidzise vanhu pamusoro pechirwere ichi.
Mumiriri weMakonde muNational Assembly, VaKindness Paradza, vaudza Studio 7 kuti ichokwadi kuti kubuda pachena kuri kuitwa nenhengo dzeparamende nevakuru vakuru muhurumende kuri kubatsira kuti vanhu vanzwisise nezvechirwere ichi.
Vati vari kushanda neimwe kambani mudunhu mavo kudzidzisa vanhu pamusoro peCovid-19 pamwe nekuvapa mishonga inouraya hutachiwana kana kuti sanitizer, sipo nezvimwe zvekuti vazvidzvirire kubva kuchirwere ichi.
Vati basa rekurwisa Covid-19 riri kukanganiswa nevanopikisa vanoda kuti vanhu varatidzire panguva ino.
Dr. Madzorera vati kunyange hazvo vanhu vakave neruzivo pamusoro peCovid-19 dambudziko guru nderekuti nzvimbo dzekuvhenekwa chirwere ichi ishoma uye kuvhenekwa kwacho kuno dhura.
Munyori musangano ranavachiremba vanorwira kodzero dzevanhu munyaya dzehutano, Dr Norman Matara vaudza Studio 7 kuti chirwere chatove muvanhu uye pave kudiwa kuti zvipatara zvipihwe zvikwanisiro kuti zvirape vanhu.
VaDubeko Sibanda vatiwo vanoona sekuti kubatwa kwemakurukota nevamwe vakuru vakuru muhurumende nechirwere ichi kuchaita kuti vape mari yakawanda kubazi rezvehutano kuitira kuti vakoti navanachiremba nevamwe vashandi vezvehutano vapihwe mihoro inofadza pamwe nekuti zvipatara zviwaniswe zvikwanisiro kuti zvikwanise kurapa vanhu vese munyika.
Covid-19 idenda ratemesa musoro nyika dzepasi rese uye muZimbabwe rauuya apo vakoti navanachiremba vari kuramwa mabasa nekuda kwemihoro yavanoti isingakwane, uye muzvipatara musina mishonga nezvimwe zvekushandisa.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende sezvo mutauriri wekomiti yehurumende inoona nezvekurwisana neCovid-19, zvakare vari gurukota rezvekuburitswa kwemashoko, Amai Monica Mutsvangwa, vange vasiri kubatika.